कस्ता स्यानिटाइजर प्रयाेग गर्ने ? कुन-कुन कम्पनीका विषाक्त छन्, जान्नुहाेस् - Nagarik Medi
२०७७ भाद्र २८, आईतबार मा प्रकाशित २ महिना अघि
काठमाडौं- घरमा स्यानिटाइजर। सवारी साधनमा स्यानिटाइजर। अफिसमा स्यानिटाइजर। खल्तीमै स्यानिटाइजर। जहाँ गयो त्यहीं स्यानिटाइजर। सम्झनासाथ हातमा दलिरहने स्यानिटाइजरले के साँच्चै कोरोना भाइरस शरीरमा छिर्न रोकिरहेको होला ? विज्ञहरू भन्छन्, ‘नक्कली र गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरका कारण बरु मान्छेको स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुगिरहेको छ।’
विभागले प्रतिबन्ध लगाएकामध्ये हाइजिन सोप एन्ड केमिकल्स प्रालिको इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड स्यानिटाइजर ब्रान्डको ५० एमएल स्यानिटाइजरमा ८३ प्रतिशत मेथानल मिसाएको पाइएको छ। मेथानलको थोरै मात्रा पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। मानिसको ज्यानै लिने मेथानल सूर्यमुखी ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा ७६.३३ प्रतिशत, एडभान्स ह्यान्ड स्यानिटाइजरमा ७० प्रतिशत र एरोसफ्टमा ५९.९६ प्रतिशतसम्म मात्रा भेटिएको प्रयोगशालाको परीक्षणमा खुलेको छ।
सरकारले समयमै दर्ता नभएका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द नगराउने हो भने स्थिति भयावह हुने औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अनुगमनबाट मेथानल मिसावट गर्ने पाँचवटा उद्योग पत्ता लाग्यो। तर, ३ सयभन्दा बढी त्यस्ता उद्योगमा मिसावट गर्ने अझै कति होलान् ? जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा विभाग संवेदनशील देखिएन।’
विभागले न्यून गुणस्तरका स्यानिटाइजर बिक्री–वितरण भइरहेको भन्दै त्यस्तो काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्यानिटाइजर बनाउने मापदण्ड तोकेको छ। उक्त मापदण्डअनुसार १०० मिलिलिटर (एमएल) स्यानिटाइजर बनाउन ७८ एमएल इथानल चाहिन्छ। तर इथानलले मात्र स्यानिटाइजर बन्दैन। त्यति नै मात्राको स्यानिटाइजर बनाउन ४.१ एमएल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, १.४ एमएल ग्लिसेरोल र बाँकी डिस्टिल्ड वाटर चाहिन्छ। मेथानल भने मिसाउन पाइँदैन। तर, नेपालका अधिकांश स्यानिटाइजरमा इथानल होइन मेथानल मिसाइएको पाइएको छ।
सुरुवातमा कोरोना महामारी फैलिएसँगै स्यानिटाइजरको माग ह्वात्तै बढेपछि धमाधम यसका उद्योग खुलेका थिए। तिनको प्रभावकारी अनुगमन जनशक्ति अभावका कारण हुन नसकेको महानिर्देशक ढकालले बताए।
मेथानल कति हानिकारक ?
मेथानलको प्रयोगले छालामा असर गर्नुका साथै यसको सेवनले स्नायु प्रणाली, मिर्गौला, आँखामा असर पार्ने विभागका महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए। ‘हामी बेलाबखत लोकल रक्सी पिएर मान्छे मरेको खबर सुन्छौं’, उनले भने, ‘त्यस्ता अधिकांश घटनाको मुख्य कारण मदिरामा मेथानलको प्रयोग हो।’
अनुसन्धानमा सहभागी नास्टकी माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. टिष्टा प्रसाईका अनुसार अधिकांश स्यानिटाइजरमा इथानलको मात्रा कमी भएकाले प्रभावकारी नभएको हो। उनी भन्छिन्, ‘स्यानिटाइजरमा हुनुपर्ने रसायन इथानल हो। तर त्यसमा मेथानल प्रयोग भएपछि स्यानिटाइजर विषाक्त बन्छ।’
जीवाणु मार्न इथानलको मात्रा धेरै हुँदा प्रभावकारी हुने डा. प्रसाई बताउँछिन्। उनका अनुसार स्यानिटाइजर बनाउँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार रसायनको परिमाण मिलाएर राख्नुपर्छ। यो अनुसन्धानका क्रममा कोरोना भाइरसबाट बच्न बजारमा प्रयोग हुँदै आएका स्यानिटाइजरको जीवाणुलाई पारेको प्रभाव हेरिएको थियो। उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित भने भएको छैन। डा. प्रसाईले थप नमुनाहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताइन्।
विषाक्त रसायन मिसाएर स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने कम्पनीले तीन किसिमका कसुर गरेकाले कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे वकिलसँग रायसल्लाह लिइरहेको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए। पहिलो कसुर, इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड स्यानिटाइजर (अल्कोहल बेस्ड) सम्बन्धी स्तर २०७६ मिचेको छ। दोस्रो, मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पार्ने मेथानलको प्रयोग भएको छ। तेस्रो उपभोक्ता ठगी गरिएको छ।
उनका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर किसिमको कसुर मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल विषाक्त रसायन प्रयोग भएको छ। ‘कोभिड महामारीको भयावह स्थितिमा औषधिजन्य सामग्रीमा विषाक्तको मिसावट गर्नु गम्भीर अपराध भएकाले कडाभन्दा कडा कारबाही हुने देखिन्छ’, उनले भने।
साभार: अन्नपूर्ण अनलाइन